Fiantsenana any Singapore | Vaovao momba ny dia
Travel asia | | General, tora-pasika, Singapore, Singapore, Fitsangatsanganana any Azia
Raha mbola tsy nankany Asia ianao dia Singapore no iray amin'ireo safidy tsara hanombohana azy. Tsy hoe satria avy amin'ity tanàna ity no ahafahanao miditra any Azia atsimo atsinanana rehetra, fa koa satria tanàna maoderina izy io, madio ary miaraka amina mifanohitra amin'izany.
Efa imbetsaka aho no nankany Singapore, ary raha ny fahitako azy dia misy hetsika telo tsy azonao adino amin'ity tanàna ity: miantsena, misakafo ary mivoaka alina. Androany aho hiresaka momba ny toerana tsara indrindra hiantsenana any Singapaoro.
1 Lalana Orchard
3 India kely
7 Kianja Marina
8 Parade Parkway
9 Tanànan'i Raffles
Ity no làlambe lehibe indrindra any Singapour, toerana ivangongoan'ny ivon-toeram-pivarotana lafo vidy indrindra. Afaka mahita firavaka ianao, karipetra Persia sy Afghan ary marika lamaody ambony toa an'i Armani, Gucci ary Valentino.
Ahoana no ahatongavana any: Miaraka amin'ny MRT (metro) dia afaka mijanona ao amin'ny gara Orchard, Somerset na Dhoby Ghaut ianao.
Fantatra amin'ny anarana hoe Kampong Glam, io no fon'ny fiarahamonina Silamo ao Singapore. Eto ianao dia afaka mahita ny karazan-damba rehetra amin'ny vidiny mirary, na dia mifindra eo anelanelan'ny bazaar aza.
Ahoana no ahatongavana any: miaraka amin'ny MRT (metro) dia afaka mijanona ao amin'ny gara Bugis ianao.
Tsy misy isalasalana fa ny manodidina an'i India any Singapore no maro loko indrindra eto an-tanàna. Feno olona foana izy io, ary fivarotana sasany tsyakatona mihitsy. Anisan'ireo fofona curry azonao atao ny mividy firavaka amin'ny volamena, volafotsy ary varahina. Azonao atao ihany koa ny mahita akanjo mahazatra Indiana toy ny punjabis sy saris. Amin'ny sasany amin'ireo fivarotana ireo dia afaka mahita ny vidiny tsara indrindra any Singapour ianao.
Ahoana no ahatongavana any: miaraka amin'ny MRT (metro) dia afaka mijanona ao amin'ny gara Little India ianao.
Na aiza na aiza alehanao dia ahitanao magazay sinoa, ary tsy misy ankanavaka i Singapaoro. Any Chinatown dia afaka mividy voankazo ivelany ianao. fitsaboana nentim-paharazana, landy, volamena ary firavaka. Azonao atao koa ny mividy vokatra asa-tanana.
Ahoana no ahatongavana any: miaraka amin'ny MRT (metro) dia afaka mijanona ao amin'ny gara Chinatown ianao.
Ny teny hoe 'Bugis' dia manondro foko indonezianina iray fantatra amin'ny fanaovana piraty. Taloha io làlana io dia nalaza noho ny fananana fiainana alina mahery. Androany dia arabe mitafo feno fivarotana sy fivarotana izy io. Afaka mahita akanjo sy pataloha jeans misy endrika ianao.
Ity faritra ity dia eo afovoan'ny vohitra nentim-paharazana Malay. Talohan'ny fanjanahantany tamin'ny fisehoany dia afaka mahita zava-manitra, mozika pop, asa tanana ary trondro ianao, ankoatry ny zavatra hafa.
Ahoana no ahatongavana any: miaraka amin'ny MRT (metro) dia afaka mijanona ao amin'ny gara Paya Lebar ianao.
Any amin'ny faritry ny fandraharahana dia misy fivarotana 250 eo ho eo i Marina Square. Ny sasany amin'izy ireo dia fivarotana tena manam-pahaizana manokana toa ny iray izay tsy mivarotra afa-tsy atin'akanjo Calvin Klein.
Ahoana no ahatongavana any: miaraka amin'ny MRT (metro) dia afaka mijanona amin'ny fiantsonan'ny City Hall ianao.
Eto ianao dia afaka mahita magazay maherin'ny 250 izay manolotra fitafiana, akanjo hoditra ary fanatanjahan-tena ho an'ny ankizy. Manana trano fisakafoanana ara-pirazanana, spa ary Starbucks ihany koa ianao.
Ahoana ny fomba hahatongavana any: amin'ny bus, zotra 15, 31,36,76,135,196,197,966,853.
Ny Raffles City Shopping Center dia mifandray amin'ny Hotel Raffles. Afaka mahita akanjo mpamorona endrika ianao, fivarotana lehibe iray gourmet, fivarotana sakafo ary trano fisakafoanana ara-poko.
Ahoana no ahatongavana any: miaraka amin'ny MRT (metro) dia afaka mijanona ao amin'ny gara Raffles Place ianao.
Singapore dia nanjanaka ny Dutch tamin'ny voalohany, ary taty aoriana dia lasan'ny Anglisy. Holland Village dia iray amin'ireo toeram-pivahinian'ny mpivahiny, izay ahafahanao mankafy fisotroana divay sy trano fisakafoanana manana kalitao.
Ahoana ny fomba hahatongavana any: amin'ny bus, zotra 7 sy 106 avy eo amin'ny Orchard Boulevard.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Fiantsenana any Singapaoro
Mikasa ny hividy akanjo an-tserasera any Singapour aho ary tiako ny hanomezanareo andraikitra iray tompon'andraikitra ary manolotra kalitao sy vidiny tsara ...
Salama azafady raha misy afaka mifandray amiko hanondrana firavaka volafotsy na varahina vita amin'ny volamena any Singapore
Mandalo ny renirano Mekong: Tibet, Sina, Burma, Thailand, Laos, Kambodza ary Vietnam
Mikasa ny dia: 1.- Ny sidina mankany Azia.